6 daabacaadda geo-injineeriyada ee bilaashka ah - Geofumadas
6 daabacaadda geo-engineering ee bilaash ah
Sebtember, 2018 Downloads, Geospatial - GIS, GPS / Qalabka
Maanta waxaannu soo bandhigi doonaa ebooks iyo daabacaad si loo fahmo horumarka farsamada ee berrinka-mashruuca iyo saameynta ay ku leedahay nolol maalmeedka. Dhammaan xulashooyinka oo dhan waa bilaash oo si sahlan loo helo.
Jeeda si weynna u kobcay technology codsatay in ay meesha geospatial, waxaa muhiim ah in ay sii updated ah darsaday shaqada sii wadaan in ay leeyihiin qiime isku mid ah ama ka sii sareeya. Sidaas daraaddeed waxaan idin keeni lix majaladaha ama download eBuugaag lacag la'aan ah si lagaaga caawiyo in aad wax bartaan oo fahmaan isbedelka cusub ama horumar farsamo oo la fulin karo berrinka kuu unwrap gudahood.
Waa mugga n ° 28 ee daabacaddan Kordhinta internetka ee la yimaada North Coast Media. Waxay bixisaa rukun bilaash ah si aad wax dheeraad ah uga ogaatid ganacsiga iyo qalabka cusub ee loo isticmaalo gudaha iyo meelaynta caalamiga ah. Sida caadiga ah, soo qaado macluumaadka iyo wararka cusub ee warshadaha. Ka hadlaysaa shirkadaha waaweyn, maamulayaasha saameynta badan, injineerada taagan, xog cusub nidaamyada hawlgalka ayaa bilaabay inuu soo baxo aagga, wax badan oo ka mid ah; Waxa kale oo suurtogal ah in la ogaado sidee iyo meesha dhacdooyinka iyo heshiisyada soo socda ay noqon doonaan. Sida sanadkan iyo content cusub in uu soo bandhigayaa, waxaad ka akhrisan kartaa noqday cusub kexeeyey by isbedelka joogto ah meelaynta aduunka industry ee, "Ciyaartoyda" cusub oo ka muuqan on goobta iyo tabo cusub in ay yihiin revolutionizing aagga sida Tani waa kiiska codsiyada khariidadda (MapSmart apps). Qalabka ugu dambeeya waa barta ugu muhiimsan ee mugga 28; gudbiyo qalab cusub soo baxaya ay u ururiyaan xogta iyo macluumaadka in waqtiga dhabta ah ayna u oggolaadaan in user ee waayo-aragnimo ah oo deg deg ah aad u faa'iido badan, la interface saaxiibtinimo iyo wax kasta ka sarreeya, si sax ah oo ku xiran tahay qiimaha u doonnaa sidiinnoo kale.
Soo qaado majaladda
5 Sababaha lagu badalayo qalabyada GPS-ga leh xalalka casriga ah ee casriga ah.
Haddii aanad ka tagin adduunka ee geolocation, waxaa jira soo jeedin labaad oo bilaash ah oo ay soo bandhigtay TerraGo Technologies. Sida magacu u muujinayo, qoraalkan wuxuu inoo sheegayaa faa'iidooyinka isweydaarsiga isticmaalka codsiyada qaaska ah ee loogu talagalay isticmaalka qalab mobile oo isticmaalkooda ka baxsan qabashada xogta fudud. Wargeyskan internetka wuxuu noo ogolaanayaa in aan ogaano dhinacyo kala duwan si ay u tixgeliyaan marka la samaynayo isbeddelkaas iyo faa'iidooyinka ay isku midka yihiin qalabkan tiknoolajiyada ugu dambeeya. Dhibcaha waa bartamaha waxayna yihiin: qiimaha, software, qalabka, xogta iyo wax soo saar. Waxay sidoo kale ku saabsan mawduucyada xiisaha leh ee soo dhawaynta GPS.
Haddii aad xiiseyneyso inaad ka ogaato wax badan oo ku saabsan geolocation, isbedel cusub iyo in la ogaado softwares iyo casriga ugu casriga ah, waxaan kugula talinaynaa in aad akhriso maqaalada aan ku daabacnay boggeena, sida «Download khariidado iyo qorshee waddo adiga oo isticmaalaya BBBike». Haddii aad sidoo kale rabto inaad ogaato sida aad u isticmaali karto tiknoolajiyadaan goobta booqashada goobta «TopView - Codsiga loogu talagalay baaritaanka iyo sahaminta»
Isu diyaarinta kumbuyuutarka
Waa gebi ahaanba bilaash ah oo sahlan in la soo dejiyo Ebook laga bilaabo DronDeploy. Thanks to the drone drone in uu jiray dhowr sano hadda, shirkado badan ayaa tixgelinaya in la isku daro qalabkan si loo hagaajiyo tayada nidaamkooda, hababka iyo adeegyada. Sababtoo ah balaadhinta warshadan, dawladaha kala duwan ee waddamada kala duwan ayaa lagu qasbay inay xakameeyaan isticmaalka tiknoolajiyadaan.
"Diyaargaroobidda Kursiga" waxaad fahmi kartaa sharciyada cusub ee aad u baahan tahay inaad tixgeliso markaad isticmaasho qulqulka, waxaa kale oo ku jira macluumaadka ku saabsan iibsashada iyo iibinta labada qalab iyo barnaamijka la adeegsanayo. Mid kale oo ka mid ah waxyaabaha ugu muhiimsan waa xirfad cusub oo ka soo baxa cusbooneysiin tiknooloojiyada, oo ah duuliyayaasha. Daabacaaddani waxay sharraxaysaa sida loo tababbaro oo loo shaqaaleeyo; Waxaa intaa dheer, waxay sheegaysaa sida halista loo yareyn karo iyo noocyada caymiska ee loo shaqaaleeyo si loo fuliyo shaqada diyaaradaha. Ugu dambeyntii, laakiin ugu yaraan, faallo ku saabsan habka ay tahay in loo daryeelo oo la dayactiro haddii ay dhacdo inay waxyeello gaarto.
Muuqaalka hawada ee goobta shaqadaada
Ka dib marka la mid ah tan tonic ayaa u muuqata ebookkan iyada oo aan wax lacag ah la soo bandhigin sidoo kale maqal DronDeploy. Xaaladdan waxaad ku arki kartaa sida loo isticmaalo daroogada diyaaradaha ee shirkadaha kala duwan ee loogu talagalay dhismaha. Isticmaalka in la siiyo qalab this ma aha oo kaliya si ay ula socdaan sida loo fuliyo mashruuc gaar ah, laakiin sidoo kale waxaa loo isticmaali karaa in marxaladda ka hor dhismaha si ay u baaraan dhulka iyagoo ka eegaya dhinaca badan balaadhan iyo in la abuuro maps . Waxa kale oo ay soo bandhigaysaa tusaalooyinka shirkadaha in la fuliyo isticmaalka drones oo ku tiriyaa sida ay mas'uul ka ahaayeen this loo baahan yahay ammaanka iyo hirgelinta software si loo kordhiyo waxqabadka of this technology cusub. Xaqiiqada ah in drones ka badan waxay leeyihiin meel muhiimad weyn in shirkadaha, waxay keeni doontaa in wacyi weyn codsigaaga in ay noqdaan kuwo xirfad badan ee suurtogalka ah loo baahan yahay; Qoraalkan kaliya ayaa keenaya aragti xiiso leh oo ah wax kasta oo lagama maarmaanka ah si aanad u faahfaahin wax faahfaahin ah haddii aad rabto in aad bilowdo ama aad kudhaqaaqdo dhaqankan.
Legrand waxay u isticmaashaa bandhigyo alaabeed ee xNUMXD si loo dardar geliyo iibinta, helitaanka kobaca 3%
Soo jeedinta shanaad waa nidaaminta khibradda ay leedahay Kaon Interactive. Shirkadda Waqooyiga Amerika waxay noo soo bandhigaysaa sida tiknoolajiyada 3D loo isticmaali karo si ay ula xiriirto una sii xoojiso suuq geynta ganacsiga. Waa arrin xiiso leh habka Kaon, iyadoo loo eegayo isticmaalka software-ka 3D ee hirgelinta istaraatijiyado cusub ama goobaha adeega macaamiisha. Labada ujeeddadood ee shirkadda iyo barta dhexe ee majaladdan internetka waa inay fududeeyaan khibradda dadka isticmaala, xoojinta xiriirka, dhisida daacadnimada u dhexeeya iibiyaha iyo kuwa iibsanaya sheyga. Wargeyska ayaa soo bandhigaya bandhigyo kala duwan oo isdhexgalka ah oo naga dhigaya in aan ka fikirno codsiyo badan oo ka badan noocyada caadiga ah ee dhismaha iyo injineernimada halkaas oo 3D horay u sii fiicnayd.
Tilmaansiinta isbarbardhigga software ee qiyaasta dhismaha
Daabacaaddan ugu dambeysa waxay timid gacmaheena laga bilaabo Talo bixinta Software. Tilmaan-bixiyahan wuxuu ina tusayaa dhibaatooyinka marka la dooranayo barnaamijka kharashka maareynta kharashka, kaararka unugyada, miisaaniyadda, qiyaasaha, is-beddelka suuqyada iyo xiriiriyaha jawiga dhismaha.
soo jeediyay waxay waxaan idin keeni ma aha isku day ah in u dhowaan qalabka ugu dambeeyay oo ugu waxtarka badan in isbedel farsamada waxaa la abuurayo oo duurka ku ah Geo-injineernimada. Fulinta qaar ka mid ah fikradaha ku jira, kuwaas oo publications free keeni kartaa faa'iidooyin labada qaab ee horumar ee waxa aannu ku samayn, laakiin in my opinion shakhsi, qiimaha xiiso daray waa in la furo maskaxda iyo fahmaan halka aad soconeysid dhinacyo halkaas oo aad leedahay si ay u tartamaan.
Post Previous«Previous Siemens iyo Bentley Systems waxay xoojiyaan isbahaysiga istaraatiijiga ah iyo dadaallada wadajirka maalgashiga
Post Next Rincón del Vago: Khayraadka naga horay usoo saaray dhibaatadaNext »